Aqoonyahan dalbadey in hab cusub lagu baaro kansarka xiniinyaha gala - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Aqoonyahan dalbadey in hab cusub lagu baaro kansarka xiniinyaha gala
La daabacay måndag 3 april 2017 kl 15.55
Kansarka xiniinyaha iyo daaweyntiisa
Hab cusub lagu baaro kansarka xiniinyaha gala. sawir: Jessica Gow/TT
Bare sare oo wax ka dhiga jaamacadaha dalkaan Sweden ayaa raba in ragga la saaro raaja guud oo lagu kala ogaanayo in ay qabaan cudurka kansarka xiniinyaha gala iyo in kale.
Anders Bjartell oo ah bare sare iyo takhtar ka hawlgala jaamacadda Skåne ayaa imminka raadinaya farsamo loo adeegsanayo in waqti hore lagu ogaado laguna daaweeyo cudurka kansarka ee ragga xiniinyaha uga dhaca.
-Dhibaatooyinka hadda jirta ayaa ah sidii lagu ogaan lahaa qofka cudurka kansarku uu soo hayo, inta aan cudurkaasi soo ridan waayo marka uu soo rito waa mar uu ku fogaadey, ayuu yiri Anders Bjartell oo ah bare sare iyo takhtar ka hawlgala jaamacadda Skåne.
Bjartell ayaa maqaal uu ku soo qorey wargeyska Dagens Nyheter ku sheegey in sida imminka cudurkaas loo daaweeyaa tahay mid aan waxtar laheyn sidoo kalana uu waqti dheer sugo qofkii raba in cudurkaas laga daaweeyo.
Aqoonyahankaan sare ayaa intaas ku darey in uu jiro hab cusub oo cudurkaas wax looga qaban karo bale uu qiima ahaan qaali yahay.
Anders Bjartell ayaa sheegey in waqti dheer ay bukaansocodka cudurkaas laga baarayo ku qaadato ogaanshaha in cudurkaas uu qabo iyo in kale , tusaale ahaan magaalada Stockholm ayaa baaritaanka noocaas ahi wuxuu qaataa qiyaastii muddo lix bilood ah, wuxuuna yiri isagoo arrinkaas ka hadlaya:
- Marka la isbarbardhigo kansarka xiniinyaha galaa, aad iyo aad buu uga danbeeyaa kansarka naasaha gala marka ay timaado dhanka baaritaanada lagu sameeyo iyo waliba waqtiga daaweyntiisa ay raggu sugaan.